Raha Andriamanitra no Tsara, Nahoana no Maro Fijaliana? – 2trondro
Home / Famonjena / Raha Andriamanitra no Tsara, Nahoana no Maro Fijaliana?
Ny fahalavoan 'ny olona
Andriamanitra tsy namorona ny olona hijaly.
Ary nanao an'i Adama sy Eva, ny ray aman-drenintsika voalohany, ho impervious ny fanaintainana sy ny fahafatesana.
Fijaliana dia nasaina ho amin'izao tontolo izao izy ireo, rehefa niverina ireo indray amin'Andriamanitra. Amin'izany heviny, fijaliana dia ny famoronana tsy mba avy amin'Andriamanitra, fa ny olona, na, farafaharatsiny, ny vokatry ny olona ny zavatra.
Noho ny fisarahana amin'Andriamanitra vokatry ny Adama sy Eva ny tsy fankatoavan'i, ny olombelona rehetra dia tsy maintsy hiaritra fijaliana (jereo Genesisy 3:16 ary Paoly Taratasiny ho an'ny Romanina 5:19).
Raha manaiky izany isika, dia mety fahamarinana toy ny fanekem-pinoana, dia azo antoka fa tsy ho mora kokoa ve raha mba hiatrehana ny fijaliana eo amin'ny fiainantsika manokana. Miatrika fijaliana, mety hahita ny tenantsika halaim-panahy manontany ny zava-tsoa ary na dia ny tena fisiany. Kanefa ny fahamarinan 'ny zavatra dia Andriamanitra mihitsy no mahatonga ny fijaliana, na indraindray ataony hamela izany hitranga.
Andriamanitra dia tsara ny toetra sy, noho izany, tsy mahavita ny mahatonga ny ratsy. Raha mamela ny ratsy ho tonga, Manao izany mandrakariva izy mba hitondra ny soa lehibe kokoa (Jereo Paoly Taratasiny ho an'ny Romanina 8:28).
Izany no nitranga tao amin'ny fahalavoan 'ny olona: Andriamanitra namela antsika ho very ny fifaliana eto an-tany Edena ihany no mba misy ho antsika, ny alalan 'ny sorona ny Zanany, ny manam famirapiratan'ny an-danitra.
Mivavaka tao amin'ny Sahan'i Getsemane ny alina ny ny fisamborana, Jesosy nanome antsika ny ohatra tonga lafatra ny fomba tokony hataontsika rehefa tonga amintsika ny fijaliana. Voalohany dia nangataka ny Ray mba haka ny fanaintainana avy Aminy. Avy eo dia nampiany, "Tsy ny sitrapoko, fa ny anao, hatao " (Luke 22:42).
Hanao izao vavaka izao dia mitaky matoky lehibe ny zava-tsoa: fa maniry ny ho sambatra na dia mihoatra noho ataontsika ary fa tena mahalala izay tsara indrindra ho antsika. Ho antsika hamantatra, ny mifanohitra, fa Andriamanitra no manam-pitiavana noho ny mamela ny fijaliana dia ny hitsara azy avy amin'ny saintsika olombelona voafetra. "Taiza ary hianao, fony Aho nanorina ny fanambanin'ny tany?"Mety hanontany antsika. "Teneno aho, Raha manan-tsaina " (Asa 38:4). Fotsiny isika dia tsy afaka mahita izay rehetra mahita. Tsy takatry ny saintsika ny fomba miafina izay Mampiasa toe-javatra sarotra izy mba manalavitra ny fon 'ny zanany mankany amin'ny fibebahana sy ny hanatratrarana ao amintsika ara-panahy tonga lafatra. Na dia mirona ny maniasia amin'ny mahita ity fiainana ity toy ny farany tsara, Andriamanitra dia mahita ny sary kokoa, ny mandrakizay sary. Mandia mahatakatra ny farany tsara mba ho ny fikasany momba izay nahary antsika: mba ho velona sy ho faly miaraka Aminy mandrakizay any an-danitra.
Ny ho tonga ao anatrehan'Andriamanitra any an-danitra mitaky ny hiova: fa ny maha-olombelona lavo ho masina; Fa hoy ny Soratra Masina, "Tsy misy maloto no hiditra [an-danitra]" (jereo ny Bokin'ny Apokalypsy 21:27). (Bebe kokoa momba ity lohahevitra ity, dia jereo ny pejy eo Afofandiovana, Famelan-keloka & Vokany.
Ity dingana fanamasinana Tafiditra fijaliana. "Raha tsy ny voam-bary latsaka ao amin'ny tany, ary maty,", Hoy i Jesosy, "Dia mitoetra irery; fa raha maty, dia mamoa be. Izay tia ny ainy no hahavery azy, ary izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay " (John 12:24-25).
Tena maharary ny hanavaka ny loatra Attachments ho ny zavatr 'izao tontolo izao, fa ny valisoa izay miandry antsika any amin'ny tontolo ho avy no mendrika ny vidiny. Ny ao am-bohoka zaza tokoa fa tia hitoetra ao amin'ny maizina mahazatra ny vao teraka. Efa nipetraka tao nandritra ny sivy volana; izany no hany zava-misy fantany. To halaina ity toerana aina sy nitondra ho ao an-fahazavan'izao tontolo izao dia maharary. Nefa izay eto amintsika malahelo, na mahatsiaro, ny fanaintainana ny nahaterahany, ny fidirana ho amin'izao tontolo izao?
Koa mainka fa ny eto an-tany fanaintainana izany ho antsika indray mandeha efa niditra tao amin'ny tena zava-misy ao an-danitra. Na inona na inona ny fijaliana isika, dia mety ho maharitra izao, na mety maharitra amin'ny ho avy, ampiononina izahay ho fantatrareo fa ny fanaintainana izany fiainana izany dia maharitra ihany-fa izy ireo, koa, dia ny andro-nitranga ary ny fifaliana ny lanitra dia feno sy mandrakizay.
Ny Bokin'ny Apokalypsy (21:4) hoy i, "[Andriamanitra] dia hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary ny fahafatesana dia tsy hisy intsony, sady tsy hisy alahelo, na miantso mafy any fanaintainana, fa ny taloha efa lasa ny zavatra. "Ary izao no fomba mahasakana mahita antsika, Ny zanaka malala, mijaly eto mandritra ny fotoana eto an-tany. Avy ny fomba fijery, eto an-tany ny fahoriana Ary tamin'ny indray mipi-maso, raha ny fiainantsika miaraka Aminy any an-danitra, ny fahasambarantsika, ho tsy misy farany.
Ny finoana Kristianina dia atokana avy amin'ny fivavahana hafa rehetra amin'izany ihany dia mampianatra fa Andriamanitra tonga olona–iray amintsika–mba hijaly sy ho faty ho ny fahotana. "[H]f dia voalefona noho ny fahadisoantsika,", Hoy ny mpaminany Isaia (53:5), "Dia notorotoroina noho ny helotsika; eo azy dia ny famaizana izay nanao antsika rehetra, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. "
Tsarovy, fa i Jesoa, maha Andriamanitra, dia (ary dia) tsy nisy ota, nefa ny ny fijaliana dia nanaintaina ho antsika, ary izahay, ny olombelona, ny voavotry ny alalan 'ny fijalian'i Jesoa Kristy.
Marina fa ny fijaliana ho antsika rehetra dia tsy mba noravana ny fanaintainana avy amin 'ny fiainantsika. To ny mifanohitra, toy ny apostoly Paoly tao amin'ny Taratasy ho an'ny Phillipians (1:29), "Efa nomena ho anareo fa noho ny amin'i Kristy, tsy tokony hino Azy ihany, fa koa mijaly noho ny."
Noho izany, ny alalan 'ny fizahan-toetra isika dia entina akaiky kokoa an'i Kristy sy ho tonga na dia handray anjara amin'ny voninahiny (Jereo Paoly Taratasiny faharoa ho an'ny Korintianina, 1:5). Àry i Jesosy hamantatra akaiky amin'ny olona izay mijaly fa ny marary lasa velona sary Azy. Reny Teresa nilaza matetika ny nahita teny amin'ny endrik'ireo izay ory fanahy, izay izy homarinana avy amin'ny tatatra any Calcutta, ny tena tavan'i Jesosy.
Noho izany, Ny fijalian'i Kristy no tsy mba noravana tenantsika manokana fijaliana, nefa niova izany. Araka ny Papa John Paul Lehibe nanoratra,"Ao ny hazo fijalian'i Kristy no tsy tanteraka ny Fanavotana amin'ny alalan'ny fijaliana, fa olombelona ihany koa ny fijaliana dia tsy maintsy navotana " (Salvifici Doloris 19).
Ny fahoriana izay avelan'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainantsika, rehefa natolotra tafaray ny fijalian'i Kristy TEO AMIN'NY HAZO FIJALIANA, maka amin'ny fanavotana toetra sy azo anolorana ho an'Andriamanitra ho famonjena ny fanahy. Ho antsika, avy eo, fijaliana Tsy Mila asehontsika amin'ny tanjona; miavaka, dia fomba hahazoana ny fahasoavana. Ny fanaintainana dia fitaovana izay mety ataony ny fanamasinana, fomba ara-panahy iray dia mety hilaza fandrantsanana.
The Taratasy ho an'ny Hebrio (5:8) Milaza amintsika i Jesoa, mihitsy,
"Nianatra fanarahana amin'ny alalan'ny zavatra niaretany." Ary ny taratasy mitohy, “Fa Jehovah hananatra azy izay tia, ary nibedy izay zanaka rehetra mandray. Izany dia ny fananarana izay tsy maintsy hiaritra. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanany; fa aiza moa izay zanaka ny rainy misy izay tsy fifehezana? ... [ny Ray] hananatra antsika noho ny soa, mba anjara amin'ny fahamasinany. Fa ny fotoana famaizana rehetra toa mampalahelo fa tsy mahafinaritra; taty aoriana izany ka nanaraka ny am-pilaminana ny vokatry ny fahamarinana ho an'izay nampiofanina tamin'ny alalan'izany izany.” (12:6-7, 10-11)
Mitantana ny hevitra momba ny fanavotana ny fijaliana, Saint Paul niaiky tao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosianina 1:24, "Araka ny nofo dia tanteraka ny tsy ampy ao amin'ny Kristy ny fahoriana noho ny vatany, izany hoe ny Fiangonana. "
Tsy midika, mazava ho azy, fa ny fijalian'i Kristy, dia amin'ny fomba rehetra tsy ampy. Ny fanatitra alatsa-drà ho antsika tanteraka ao aminy tanteraka sy mandaitra. Na izany aza, Rehefa heverina ny Passion, Miantso antsika i Jesosy mba mitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Azy; hanao fifonana ho an'ny iray hafa, Manahaka an'i Azy, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fijaliana (jereo Luke 9:23 ary Paoly Taratasy Voalohany ho An'i Timoty 2:1-3).
Toy izany koa, ao amin'ny taratasiny voalohany (3:16), Saint John manoratra, "Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, fa Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika; ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. "
"Izay mino Ahy koa hanao ny asa ataoko,", Hoy ny Tompo; "Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria mankany amin'ny Ray " (John 14:12). Noho izany, Jesosy maniry ny fandraisana anjara amin'ny asan'ny fanavotana tsy avy amin'ny fanerena fa avy ny fitiavana, toy izany koa ny fomba ray eto an-tany mitady hampiditra ny zanany lahy ao amin'ny asa. Ny fifonana ho iray hafa, koa, dia manovo avy Kristy tsy manam-paharoa sy ny fanelanelanana mitokana amin'Andriamanitra (jereo Paoly Voalohany Taratasy ho an'i Timoty, indray, 2:5).
Azo antoka, izay rehetra ataontsika dia miankina amin 'ny zavatra nataony, ary ho azo afa-tsy izany. Hoy i Jesosy ao amin'ny Jaona 15:5, "Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy, dia izy no mamoa be, fa raha misaraka amiko azonao atao na inona na inona. "Noho izany, Izany no ny fahavononany mba hijaly ho Azy, ary amin'izay "tsy ampy,"Hampiasa Paoly teny, ao amin'ny fijalian'i Kristy.
Ny fanasana mba handray anjara amin'ny asa fanavotana Kristy amin'ny alalan'ny fanakambanana ny fahoriana eo ho famonjena antsika sy ny famonjena ny hafa tokoa ny fampiononana mahatalanjona. Saint Therese de Lisieux nanoratra:
“Eto amin'izao tontolo izao, amin'ny famohazana ny maraina aho taloha mba mieritreritra ny zavatra mety hitranga na mahafinaritra na vexatious mandritra ny andro; ary raha miezaka: Nijery ihany no zava-niseho I nitsangana dispirited. Ary izany dia tena ny fomba hafa: Mihevitra aho fa ny zava-tsarotra sy ny fijaliana izay miandry ahy, ary hitsangana faly kokoa sy feno herim-po bebe kokoa aho, mialoha ny fahafahana ny nanaporofo ny fitiavako an'i Jesosy ... . Dia nanoroka fatratra ny hazo fijaliana ka hametraka azy amim-pitiavana eo amin'ny ondana raha mbola akanjo, ary raha hoy izaho taminy: 'My i ​​Jesosy, efa niasa ampy ka nitomany ampy mandritra ny telo-ary-telo-polo taona ny fiainana eto an-tany mahantra ity. Ento ny sisa. ... Ny kosa dia hijaly sy hiady '” (Fisainany sy Reminisces).
Raha ny fijaliana tafaray amin'ny Tompo Jesoa no fanantenana–na dia mbola maharary–afa-tsy Aminy ny fijaliana mangidy sy foana.
Tamin'izany toe-javatra, tsy misy zava-dehibe ao amin'ny fijaliana, ary izao tontolo izao nihazakazaka avy aminy–nitady mba tsy izany mihitsy ny vola lany–na tsiny ny olona noho ny loza. Ohatra, ny sasany hahita fahoriana sy te ho famaizana mpanao teny tsy valiana 'Andriamanitra amin' ny tsy manam-pinoana, na ny fijaliana sy ny fahafatesana amin'ny farany avy, milaza, havokavoka homamiadana araka ny nitondra tamin'ny iray manokana tsy fahampiam-pinoana. Raha ny tena izy, misy ny olona izay mino fa tian'ny ho an'ny rehetra mpino ny hiaina tanteraka ho afaka amin'ny aretina sy ny aretina; dia niakatra ho any amin'ny olona mba hanapa-kevitra na fa ny maha mahantra dia fahotana, rehefa Mampanantena Andriamanitra fanambinana.
Ny Baiboly, mazava ho azy, nolaviny tanteraka izany fomba fijery izay isan'ny fotoana, anisan'izany ny Toriteny ny tendrombohitra any Matthew 5, “Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no ho afa-po,” ary Luke 6:20, oh, "Sambatra ianareo mahantra ...,"Ary" Loza ho anareo izay manan-karena " (Luke 6:24; cf. Matthew 6:19-21; ny Taratasy James 2:5).
Asa, izay milaza ny Baiboly fa "olona marina sy mahitsy" (Asa 2:3), niaritra ny aretina, ny fahafatesan'ny olon-tiana, ary ny fahaverezan 'ny fananany.
Maria Virjiny, izay tsy nanota (Luke 1:28), nijaly fandavana, tsy manan-kialofana, fanenjehana, ary ny fahaverezan 'Ny Son- "sabatra dia manindrona ny tenany koa,"Simeona efa nanambara taminy (Luke 2:35).
Jaona Mpanao-batisa, ny mpialoha làlana Jesoa, "Nanao lamba volon-drameva", ary nihinana "valala sy tantely remby" (Matthew 3:4). Timoty nijaly noho ny aretina mitaiza vavony (Jereo Paoly Taratasy Voalohany ho An'i Timoty 5:23); ary Paoly, tsy maintsy handao ny mpiara-miasa, Trofimo, aoriana noho ny aretina (jereo Paoly Second Taratasy ho an'i Timoty 4:20).
Koa, raha ny Saint Petera naka fanahy an'i Jesosy mba hampandefitra ny fijaliana, Jesosy namaly, "Mankanesa ato ivohoko, Satana! Ianao no sakana ho ahy; fa ianareo tsy eo amin'ny lafiny Andriamanitra, fa ny olona " (Matthew 16:23).
Raha ny marina, misy fikasana hahazo voninahitra rehefa nandika amin'ny hazo fijaliana dia demonia eo amin'ny natiora (cf. Tim Staples, nitanisa Fulton J. Sheen, "Katolika Valiny Miaina" onjam-peo fandaharana [Février 24, 2004]; hita ao amin'ny catholic.com).
Near hifarana ny fiainany, toy izany koa i Petera, izay indray mandeha no niteny mafy Jesosy noho ny te Azy mba tsy hijaly, dia nilaza tamin'ny mahatoky:
"Izany [lova any an-danitra] ianao faly, na dia ankehitriny fa vetivety foana dia mety tsy maintsy hijaly fitsapana isan-karazany, ka ny tena manana ny finoanareo, sarobidy kokoa noho ny volamena izay simba na dia pitsapana amin'ny afo, Mety hiova ho fiderana sy voninahitra ary haja, rehefa haharihary i Jesosy Kristy. " (Petera Taratasy Voalohan'i Md 1:6-7)
Noho izany, Tsy ho very maina izany?
Mba hamaliana io fanontaniana io, dia afaka mitodika Saint Paul tao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina 8:18: "Heveriko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy mendrika mampitaha indray amin'ny voninahitra izay haseho amintsika."
Amin'izany lafiny, tokony tsy hanadino ny loka: fa indray andro, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, antsika tsirairay eto dia hahita ny Tompo Jesoa Kristy ao amin'ny Fanjakany; indro ny tavany mamiratra; handre ny feony anjely; ary manoroka ny tanany sy ny tongony masina, voalefona noho ny noho. Mandra andro izany, afaka mitory toy ny Saint François d'Assise in Ny Lalana ny Hazofijaliana, "Isika mankafy Ianao, O Kristy, ary no itsofanay rano anareo, satria ny ny Masina Cross Efa nanavotra ny izao tontolo izao. Amen. "
Oktobra 20, 2019